थाहा खबर: निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भत्तामा विभेद
काठमाडौं : स्थनीय तहको निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले पाउने विशेष भत्तामा विभेद देखिएको छ।
निर्वाचनमा खटिएका सबै तहका सुरक्षाकर्मीलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउने भनिए पनि सेना, प्रहरी र सशस्त्रले पाउने भत्ता तह र ठाउँअनुसार फरक-फरक छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रत्येक कर्मचारीका लागि खाजा भत्ता र दैनिक भत्ता गरी सात दिनको ५ सयका दरले ३ हजार ५ सय दिएको छ। दुई चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई भने ११ हजार दिएको छ। नेपाल प्रहरीका करिब ४५ हजार कर्मचारी सशस्त्रका करिब ३२ हजार कर्मचारी तथा नेपाली सेनाका २५ हजार कर्मचारी सुरक्षामा तैनाथ छन्।
निर्वाचनमा करिब ६७ हजार जनशक्ति मध्ये नेपाल प्रहरीका ५० हजार जनशक्ति तैनाथ छन्। यो कुल जनशक्तिको ७५ प्रतिशत हो।
सुगम-दुर्गम र जिम्मेवारीअनुसार सैनकि जनशक्तिलाई ७ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी सेनाको छ। नेपाल प्रहरीका एक कर्मचारीका अनुसार कम्तिमा ६ हजार दिने भनिएको भएपनि ७ दिनको भन्दै ३ हजार ५ सय मात्रै दिने निर्णयले सरकारी विभेद देखिएको छ। मतगणना गरन् नै एक साताभन्दा बढी लाग्ने त्यसभन्दा एक साताअघि बाटै खट्नुपर्ने भएकाले पनि प्रहरीलाई दिएको भत्ता निकै कम भएको गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको छ।
निर्वाचनमा खटिने सेना र प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयले दैनिक ५ सय रुपैयाँका दरले ३० दिनको २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मीका लागि करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भत्ता विनियोजन गरेको छ। त्यसमा सेनाको भत्ता जोडिएको छैन।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले सहरी क्षेत्र र सुगम/दुर्गम जिल्ला तथा परिचालनको स्वरुप हेरेर कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको बताएका छन्। 'काठमाडौं र दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका जनशक्तिको भत्ता फरक फरक हुन्छ, नेपाल प्रहरीमा कसैलाई पनि विभेद गरिएको छैन। अन्य समितिमा के छ? त्यो मलाई थाहा छैन।'
गाली गर्दा हाेस पुर्‍याउनुस्, जेल पर्नुहाेला !
काठमाडौं : रिस उठ्यो भन्दैमा कसैलाई गाली नगर्नुस् है, पर्नुहोला नि फन्दामा । हो अब कसैलाई गाली गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ...
काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीमा ध्यान दिँदै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणक...
बराबरीकाे अडानबाट पछि हट्याे माअाेवादी
काठमाडौं : एमालेसँगको एकीकरणमा बराबरीको अडान राखेको नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसबाट पछि हटेको छ। माओवादी नेताहरुले बराबरीको सट्टा एमालेसँग...
सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने वाणिज्य बैंकहरुको सहमति
काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने घोषणा गरेका बेला वाणिज्य बैंकहरुले भने सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने सह...